एकै परिवारका चार भाइ चोरीमा सक्रिय !
काठमाडौँ – उपत्यकामा चोरी तथा ठगीमा एकै परिवारका चार भाइ संलग्न रहेको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले चोरीमा संलग्न सिन्धुली दुधौलीका उमेश घिसिङ, प्रेम घिसिङ र दानबहादुर तामाङलाई बुधबार पक्राउ गरेको छ । उनीहरूसँग चोरी गर्ने रमेश घिसिङ केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् भने लालबहादुर घिसिङ केही महिनाअघि जेलबाट छुटेका छन् । उमेश, प्रेम, रमेश, र लालबहादुर सहोदर दाजुभाइ हुन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रहरीका अनुसार चोरी गर्दागर्दै समूहमध्येका कोही सदस्य पक्राउ परे जेलबाट छुटाउनेदेखि परिवारका सदस्यलाई हेरचाह गर्ने जिम्मा बाहिर बसेकाले लिन्थे । जेलबाट छुटेपछि फेरि पुरानै धन्दामा सक्रिय हुन्थे । उनीहरूले वर्षांैदेखि चोरी र ठगी धन्दा चलाउँदै आएको प्रहरीको दाबी छ । डिएसपी बोगटीले भने, ‘पक्राउमध्ये अधिकांश पटके छन् । उनीहरूको आफ्नै नियम रहेछ । जो जेलमा पर्छ । उसलाई छुटाउनेदेखि खर्च बाहिर बसेकाहरूले गर्थे । परिवारका सदस्यलाई हेरचाह गर्ने जिम्मा पनि उनीहरू नै लिन्थे । आलोपालो गर्दै उनीहरूले वर्षौंदेखि चोरी र ठगी धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ ।’
प्रकाशित : शुक्रबार, चैत २९, २०७५०६:४२
टिपरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको घटनास्थलमै मृत्यु ! स्थानीयले टिपर नै जलाए !